अटो शोमा गाडी किन्नेलाई वेष्ट अफर आएका छन्ः निराकार श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता - MeroAuto
2076:5:10 7:32 AM
विगतको पाँचवटा अटो शोमा सहसंयोजक र अघिल्लो र यसपटकको अटो शोको संयोजकको रुपमा काम गरेका नाडा अटोमोवाइल एसोसियसन अफ नेपालका सदस्य निराकार श्रेष्ठसँग आजबाट सुरु भएको १४ औँ नाडा अटोको विषयमा गरिएको कुराकानीको संपादीत अंशः
आजबाट अटो शो सुरु हुँदैछ, यस पटकको अटो शोमा विशेष के छ ?
यसपटकको जति नयाँ बाइक र गाडीको लञ्च अहिलेसम्म कुनैपनि अटो शोमा भएकै थिएन । पहिलो पटक मेलामा शोकेस हुने गाडीहरु र मोटरसाइकहरुको संख्या अत्यन्त धेरै रहेको छ । यसले अवलोकनकर्ता वा सवारीसाधन किन्ने ग्राहकको लागिपनि नयाँ अवसर सृजना गरेको छ ।
विगत १० महिनादेखि निकै सुस्त रहेको अटो मोबाइलको कारोबर केही हदसम्म चलायमान हुने अपेक्षा सबैले गरेको देखियो । तपाईले के पाउनु भएको छ ?
अवस्य नै यो एउटा नयाँ आशा संचार हुने समय हो । अटोमोबाइल व्यवसायमा वित्तीय संस्थाहरुको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसपटक बैंकहरुले करिब ९ प्रतिशत हाराहारीबाटै अटो कर्जाको स्कीम ल्याउने हामीले बुझेका छौं । यदि यो रेटमा अटो कर्जा आयो भने यसले निकै सकारात्मक संदेश दिने छ ।
अहिले बिक्रेताले गाडी बिक्री गर्न हरेक गाडीमा ठूलो स्कीम ल्याएर छुट दिएका छन्, भने बैंकहरुले कर्जाको व्याजदरमा विशेष रेट दिएका छन् । यसले समग्रमा अटो क्षेत्रको कारोवार बढ्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।
आज अर्थमन्त्रीले अटो शोको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ । नीतिगत समस्याका कारणले अटो क्षेत्रमा समस्या आएको हामी सबैले बुझेकै छौं । उहाँसँग तपाईहरुको अपेक्षा कस्तो रहेको छ ?
परिस्थितिले नीति बनाउने हो । सायद उहाँको समयमा त्यस्तै परिस्थिति परेको हुनसक्छ । आर्थिक अवस्था निकै राम्रो भएको समयमा उहाँ मन्त्री हुनुभएको भए अवस्था फरक हुनसक्थ्यो होला । केही समयअघि बाणिज्य मन्त्रालयले व्यापारघाटा कम गर्न ल्याएको कार्ययोजनामा अटो क्षेत्रमा अझै कडाई गर्ने विषयलाई उहाँले नै सहजीकरण गरिदिनु भएको जस्तो लाग्छ । त्यसैले कुनै व्यक्तिबाट यहि भए हुन्थ्यो भन्नुभन्दा समय अनुसारको अपेक्षा राख्दा ठिक होला ।
अटो शोमा विद्युतीय सवारीसाधनको उपस्थिति बाक्लो हुँदै गएको छ । यस्तोमा भोलिका दिन विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्री कसरी अगाडि बढ्ला ?
विद्युतीय सवारीसाधनको माहोल बढ्दै गएको पक्कै हो । अघिल्लो अटो शोमा २ वटा इलेक्ट्रीक ब्रान्डले भाग लिएका थिए । यसवर्ष करिब ७ ब्रान्डले भाग लिदैछन् । यहाँ विषय विद्युतीय सवारीसाधनको मात्र होइन । वातावरण मैत्री सवारीसाधनको हो । यो क्षेत्रको भविष्य कता जान्छ भन्ने विषयमा अहिल्यै भन्न सक्ने अवस्था छैन । विश्वका धेरै देशमा विद्युत न्यूक्लियर प्लान्टबाट बनाइन्छ यसले पनि केही समस्या निम्तने देखिएको छ । तर, नेपालमा क्लीन इनर्जि भएकाले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन निकै राम्रो हुने संभावना छ । तर, यसलाई चाहिने पूर्वाधार निर्माणमा केही काम भएको छैन ।
अहिलेसम्म एकदमै कम संख्यामा गाडीहरु आएका छन् । अब संख्याको वृद्धिसँग चुनौति पनि थपिएको छ । त्यसैले सरकारी तवरवाट चार्जिङ स्टेशनलगायतका काम तिब्रगतिमा अगाडि बढाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रले दिएका चार्जरले मात्र पुग्दैन र हुँदैन ।
तत्काल गाडी किन्ने र भविष्यमा गाडी किन्न सोच बनाउने अवलोकनकर्ताले अटो शोमा के पाउँछन् ?
अटो शोमा सबै ब्रान्डले गाडी राखेका छन् । हरेक कम्पनीले राम्रो अफरहरु ल्याएका छन् । यसले समग्रमा गाडी किन्नेका लागि निकै राम्रो अवशर प्रदान गरेको छ । साथै भविष्यमा गाडी किन्ने सोच बनाउनेको लागिपनि अटो शो सूचना लिने अवसरको हुने छ ।
एयरबसले हातपार्याे ३० विलीयन डलरको अर्डर
विद्युतीय बसको सञ्चालन खर्च डिजेल बसको तुलनामा ५ गुणा कम
अब बिएमडब्ल्यूका प्रिमियम कार नेपालमा
अझै महंगो हुँदै मोटरसाइकलदेखि कारसम्म, यस्ता छन् कारण
नयाँ आउने नेक्सन रेगुलरभन्दा कति फरक
दशैंमा कम मूल्यका कार किन...
सुजुकी जिक्सरको दुई मोडलक...